अहिले सम्म, मैले संक्षिप्त सर्वेक्षण त्रुटि ढाँचाको समीक्षा गरेको छु, जुन स्वयं पुस्तक लम्बाइ उपचार (Weisberg 2005; Groves et al. 2009) को विषय हो। यद्यपि यो ढाँचा व्यापक छ, यो सामान्यतया शोधकर्ताहरूको कारणले महत्त्वपूर्ण कारक अनदेखा गर्न सकिन्छ: लागत। यद्यपि लागत - जुन समय वा पैसाले मापन गर्न सकिन्छ - अकादमिक शोधकर्ताहरूले मात्र स्पष्ट रूपमा छलफल गरेको छ, यो एक वास्तविक अवरोध छ जुन उपेक्षित हुँदैन। वास्तवमा, सर्वेक्षण अनुसन्धान (Groves 2004) को सम्पूर्ण प्रक्रिया को लागी लागत मूल हो: यो शोधकर्ताहरूको कारण सम्पूर्ण जनसङ्ख्या भन्दा मानिसहरूको नमूना साक्षात्कार हो। पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्दा त्रुटि कम गर्न एक एकल दिमाग भक्ति सधैं हाम्रो सर्वोत्तम रुचि मा छैन।
त्रुटि कम गर्न एक जुनून को सीमा स्कट केटर र सहयोगियों (2000) टेलीमार्केटिंग प्रोजेक्ट द्वारा टेलीफोनी सर्वेक्षणहरुमा nonresponse को कम गर्न मा महंगे क्षेत्र को संचालन को प्रभाव मा चित्रित गर्दछ। केटर र सहकर्मीहरूले दुई-एकसाथ अध्ययन गरे, "मानक" भर्ती प्रक्रियाहरू प्रयोग गरी एक र "कठोर" भर्ती प्रक्रियाहरू प्रयोग गरी। दुई अध्ययनहरू बीचको फरक भिन्नता थियो जुन सम्पर्क उत्तरदायीहरू मा गएर उनीहरूलाई भाग लिन प्रोत्साहित गर्ने प्रयास थियो। उदाहरणका लागि, "कठोर" भर्तीको साथ अध्ययनमा, शोधकर्ताहरूले नमूना भएका घरहरूलाई अधिक बारम्बार र अधिक समयको अवधिमा बोलाए र सहभागीहरूलाई थप अन्तर्वार्ता दिए भने यदि सहभागिताले सुरुमा भाग लिन इन्कार गरे। यी अतिरिक्त प्रयासहरूले वास्तवमा निस्क्रिय दरको कम दर उत्पादन गरे, तर तिनीहरूले पर्याप्त मात्रामा थपे। "कठोर" प्रक्रियाहरू प्रयोग गरी अध्ययन दुई चोटि महंगा थियो र आठ पटक ढिलो थियो। र, अन्तमा, दुवै अध्ययनहरूले अनिवार्य रूपमा समान अनुमानहरू उत्पादन गरे। यस प्रोजेक्ट, साथ नै त्यस्ता निष्कर्षहरू (Keeter et al. 2006) सँगै पछिल्लो प्रतिकृतिहरु तपाईलाई आश्चर्य लाग्न सक्दछ: के हामी दुई उचित सर्वेक्षण वा एक प्रिन्टर सर्वेक्षणको साथ राम्रो छौँ? के बारे मा 10 उचित सर्वेक्षण या एक प्राचीन सर्वेक्षण? लगभग 100 उचित सर्वेक्षण वा एक प्राचीन सर्वेक्षण? केहि बिंदुमा, लागतको फाइदाले गुणस्तरको बारेमा अस्पष्ट, नसोपसिम चिन्ताहरू बाहिर जान्छ।
म यस बाहेक अध्यायमा देखाउँछु, डिजिटल युगको द्वारा बनाईएको धेरै अवसर अनुमानहरू बनाउने बारे होइन भनेर स्पष्ट रूपमा कम त्रुटि छ। बरु, यस्ता अवसरहरूले विभिन्न मात्राको अनुमान लगाएका छन् र सम्भवतः तीव्र त्रुटिहरूको साथमा तीव्र र सस्ता अनुमानहरू अनुमान गर्दैछन्। शोधकर्ताहरू जो कि एक मात्र मन पराउने जुनसुकै कुरामा गुणस्तरको अन्य आयामहरूको खर्चमा त्रुटि कम गर्नको लागि गल्ती गर्नका लागि उत्साहजनक अवसरहरूमा मिल्दैन। कुल सर्वेक्षण त्रुटी ढाँचाको बारेमा यस पृष्ठभूमिलाई दिईयो, हामी अहिले सर्वेक्षण अनुसन्धानको तेस्रो युगको तीन मुख्य क्षेत्रहरूमा जान्छौं: प्रतिनिधित्व गर्नका लागि नयाँ दृष्टिकोण (खण्ड 3.4), माप (धारा 3.5) को नयाँ दृष्टिकोण र सर्वेक्षण संयोजनका लागि नयाँ रणनीतिहरू ठूलो डाटा स्रोतहरू (खण्ड 3.6) सँग।